एचआईभी संक्रमितको उपचारमा अपनाईएको नयाँ नीतिबारे छलफल – Sadarline
नेपालगन्ज : एचआईभी संक्रमितको उपचारमा अपनाईएको नयाँ नीतिले उनीहरुमा नयाँ जीवन दिने एक कार्यक्रमका सहभागीले औल्याएका छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले मंगलबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको एआरटी परीक्षण उपचार पद्दतिको बारे स्वास्थ्यकर्मी र सरोकारवाला बीच अभिमुखिकरण कार्यक्रमका सहभागिले सो कुरा औल्याएका हुन ।
सो कार्यक्रममा सहजिकरण गर्दै भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगन्जका फिजिसियन डा. संकेत रिसालले एचआईभी संक्रमित भएको जानकारी हुने बित्तिकै उपचारमा एआरभी औषधि खान सुरु गर्दा उनीहरुमा संक्रमणको दर कम हुने साथै विरामीलाई पनि सहज हुने बताए ।
उनले एचआईभि संक्रमितको ‘सिडिफोर’ काउन्ट ५ सय भन्दा कम भएकालाई संरकारले एआरभी औषधि खुवाउदै आएकोमा अव नयाँ नीति अनुसार सबै संक्रमितलाई सो औषधि खुवाउने भएको जानकारी दिए ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका फोकल पर्शन रामबहादुर चन्दले सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिले एचआईभी संक्रमितको उपचारमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले एचआईभी संक्रमणका बिरुद्ध सरकारले दु्रत गतिको बाटो प्रयोग गर्दै तीन ९० को रणनीति अपनाएको बताए । पहिलो ९० ले संक्रमितको अवस्था पत्ता लगाउने, दोस्रो ९० ले संक्रमितलाई उपचारमा राख्ने र तेस्रो ९०ले उपचारमा रहेका सबैलाई एआरभी औषधि खुवाउने रहेको जानकारी दिदै भने–‘राज्यको नीति एचआईभि संक्रमण रोक्ने नै भएकोले सबै विरामीलाई औषधि सेवन गराउनु हो । ’
बाँके जिल्लामा एचआईभी एड्सको संक्रमणबाट अहिलेसम्म एक सय १३ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क जिल्ला जनस्थास्थ्य कार्यालय बाँकेले दिएको छ । कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार मृत्यु हुनेमा नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाका धेरै छन् ।
जिल्लामा एचआइभी संक्रमितहरुको संख्या भने नौ सय ६२ रहेको छ । जसमा पुरुष पाँच सय ३५, महिला चार सय १४ र तेस्रो लिङ्गी १३ जना छन् । भने अत्यन्तै जोखिमको अवस्थामा ८ हजार ४ सय ६५ रहेको पाईएको छ । नेपालगन्जको भेरी अञ्चल अस्पतालमा एआरटी सेवा लिने एचआइभी पोजेटिभहरुको संख्या भने ४ सय ५९ रहेको छ ।
सो कार्यक्रममा भेरी अञ्चल अस्पतालका डा. रिसाल, जनस्वास्थ्य अधिकृत चन्द, ल्यावका, केशव ज्ञवाली, सञ्जय कुमार पौडेल र ईन्द्र सैनीले सहजिकरण गरेका थिए ।
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) गरेको काममा ढिलासुस्ती हुनेछ । विचार गरेर निर्णय लिनु उचित होला । दबाब र तनाव बढेको महसुस हुनेछ । पारिवारिक समस्या आइपर्ला । मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा) इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन् । […]
१७ जेष्ठ २०७८, सोमबार १०:०१
९ कार्तिक २०७७, आईतवार ०९:०७